Afar ayaa loo xushay 2021 Qalinjabiyeyaal caan ah | Faahfaahinta Wararka Degmada - Dugsiyada Dadweynaha ee Harta Biyaha ee ISD 834
Maajo 7 , 2021
Afar shaqsi ayaa la sharfi doonaa inta uu nool yahay oo dhan marka ay ka soo qalin jebiyaan Dugsiga Sare ee Stillwater. Waxay ku biiri doonaan in ka badan 100 kale oo loogu magac daray Qalinjabiyeyaasha Qalinjabiya tan iyo markii abaalmarinta markii ugu horreysay la siiyay 1987.
Julie Kink (Fasalka 1979)
Markii ay jirtay 8 Julie Kink waxay wayday walaalkeed, oo ah askari da 'yar oo reer Vietnam ah, laakiin markii dambe waxay u aragtay iyada oo u yeedhaysa u doodid iyo kheyraad qoysaska Gold Star, sida iyada oo kale, oo xubinta adeegeeda ee dhimatay ay dhimatay iyada oo u adeegaysa wakhti khilaaf. Iyadu waa xubin aasaase ka ah Guddiga Xiriirinta Qoyska, koox mutadawiciin ah oo ka caawisa halyeeyada iyo qoysaska kuwa dhacay inay isku xirmaan midba midka kale si ay ula wadaagaan xusuustooda. In ka badan labaatan sano, waxay ka caawisay in ka badan 500 qoysaska kale ee reer Vietnam Gold Star inay wax ka bartaan kuwa ay jecel yihiin. Waxay afhayeen ka noqotay munaasabado badan oo halyeeyo ah waxayna la shaqeysay Ururka Duuliyayasha Diyaaradaha Helicopter ee Vietnam si taallo looga dhiso Arlington National Cemetery si loo maamuuso duuliyeyaasha diyaaradaha helicopter-ka Vietnam iyo shaqaalihii la dilay intii dagaalka socday. Suxufiyad tababaran, Julie waxay sidoo kale u adeegtay bulshadeeda maxaliga ah sida wariye wargeys iyo Isuduwaha Xiriirka Dadweynaha ee HOPE ansaxinta iyo Adeegyada Qoyska. Waxay u shaqeysay sidii xogheynta duubista ee Magaalada Stillwater tan iyo 2012.
Kami Mendlik (Fasalka 1991)
Kami Mendlik waa rinjiye muuqaalka muuqaalka qaran ahaan iyo caalami ahaanba la aqoonsan yahay, sidoo kale waa qoraa, macalin iyo milkiile ganacsi. Rinjiyadaheeda saliidda ee quruxda badan, oo muuqaallo badan ka soo qabta agagaarka Dooxada 'Croix Valley', ayaa lagu soo bandhigay joornaalada, bandhigyo jaangooyo leh iyo qolalka kala duwan ee waddanka oo dhan. Sanadkii 2008-dii waxay aasaastay St. Croix River School of Rinjiyeynta oo ku taal Stillwater halkaas oo ay ku barayso farshaxanleyda kale ee adduunka oo dhan aasaaska rinjiyeynta matalaadda iyadoo si gaar ah diiradda loo saarayo midabka. Waxay dib ugu celisay bulshadeeda maxalliga ah iyada oo u adeegaysa sidii farshaxanle deggenaansho dhowr dugsiyo hoose ah iyo ururinta lacag lagu taageerayo barnaamijyada farshaxanka ee guud ahaan Degmada Dugsiga Dadweynaha ee Stillwater. Kami waa xubin saxeex ka ah labada gabdhood ee fanaaniinta ah ee reer maraykanka ah iyo mujtamaca shucuurta leh ee maraykanka isla markaana wuxuu kasbaday aqoonsi inuu yahay muusigle yaqaanka sayniska iyo macalinka midabka iyo nuurka.
Marlena Chow Morgan (Fasalka 1996)
Jacaylkii hore ee muusigga wuxuu u beddelay shaqo waqti-buuxa ah Marlena Chow Morgan. Waxay ku qaadatay shaqadeeda sida violinist iyadoo la ciyaaraysa qaar ka mid ah fannaaniinta adduunka ugu sarreeya. Markay ka qalin jabisay Stillwater, Marlena waxay heshay shahaadada Bachelor-ka ee Muusikada iyada oo lagu soo bandhigayo waxqabadka violin ee New England Conservatory ee Boston, Massachusetts waxayna ku qaadatay hal sano oo ah Fellow ah New World Symphony ee Miami Beach. Marlena waxay xubin ka ahayd Naples Philharmonic ilaa 2001 waxayna sidoo kale ku biirtay abaalmarinta Grammy Award oo ku guuleysatay Santa Fe Opera Orchestra 2003. Iyada oo ah soloiste iyo muusikiiste qol, waxay la soo muuqatay kooxda Saint Paul Chamber Orchestra, National Repertory Orchestra ee ku taal Breckenridge, Colorado , Symphony-ka Dunida Cusub, Kooxda Faneedka Madaniga ah ee Minneapolis, Barnaamijka Muusigga Xagaaga ee Musicorda, iyo Wada-hawlgallo lagu qabtay xafladaha Muusikada ee Tanglewood iyo Aspen. Waxay sidoo kale marti ku noqotay Farshaxanka Bulshada ee Muusikada Minnesota iyo Bandhigga Muusikada ee Madaxa. Marka laga soo tago la xiriirka bulshada iyo dugsiyada iyada oo loo marayo riwaayadaha iyada oo xubin ka ah Naples Philharmonic, Marlena waxay la talinaysaa jiilalka soo socda iyada oo ah macallin Suzuki violin ah oo ku taal Naples, Florida, halkaas oo ay kula nooshahay ninkeeda Marc iyo gabadheeda Rose.
Mark J. Salmen, Kabtanka, Navy US (Ret.) (Fasalka 1969)
Mark Salmen adeegyadu marwalba waxay u ahayd qaab nololeed. Markii uu dhammeeyay dugsiga sare, waxaa loo magacaabay Akadeemiyadda Ciidanka Badda ee Mareykanka. Wuxuu bilaabay xirfad fureysa 34 sano oo firfircoon oo keyd ah Adeegga Badda. Markuu ka soo baxay waajibaadka firfircoon, Mark wuxuu u shaqeeyay Corps of Corps of Engineers, Maamulka Duulista Federaalka iyo Northwest / Delta Airlines halkaas oo uu 29 sano ku qaatay Hawlaha Dhulka, Hawlgallada Duulista iyo waaxaha Xakamaynta Hawlgallada. Wuxuu dib ugu celiyey beeshiisa deegaan ahaan tababare ahaan, hogaamiye kooxeedka 'Boy Scout' iyo tabaruce Toys-For-Tots, Wiilasha iyo Naadiyada Gabdhaha iyo Adopt-A-Highway. Wuxuu sidoo kale lataliye u noqday dhalinyarada tabaalaysan. Mark waxaa u magacaabay Badhasaabka Minnesota inuu noqdo wakiilka dadweynaha ee laba guddi oo kala ah Tababarka Badbaadada Dadweynaha ee Gobolka iyo guddiyada dib-u-eegista tas-hiilaadka wuxuuna helay Bogaadinno Badhasaab oo ku saabsan shaqadiisa. Wuxuu sidoo kale si firfircoon uga soo shaqeeyay Saint Paul Festival iyo Heritage Foundation iyo Saint Paul Winter Carnival meelo badan.